Igwe ugogbe 2020 | Meghachite nkpuchi gị maka oge ịgba ski - ULLER
DABỌCH FR IDBỌCH BLBỌCH:: NA-EGO 75%
Igwe ihu igwe 2020 Mee ka nkpuchi gị dị ọhụrụ maka oge ịgba ọsọ!
Snowy ụbọchị na-abụ anyị abụ! Obi abụọ adịghị ya, anyị na-enwe ọ happyụ mgbe anyị hụrụ na nnukwu snow dara na ebe ntụrụndụ. Obi abụọ adịghịkwa: agba na ndị ski bụ ndị freak kacha mgbe oge ski,enweghi ndidi maka akwa mmiri na-esote ịbịa ma ọ bụ ezumike izu ụka iji soro ndị ọrụ ibe gị na-eme njem ma ọ bụ banye freestyle, na-eme ihe kachasị njọ na usoro.
Ndị hụrụ egwuregwu snow na ịgba ọsọ na snowboard Ha na-ahọrọkarị snow dara ada, eziokwu ahụ bụ na enwere ekele na ọbụlagodi ụbọchị anwụ, anyị na-ahụ obere snow na ọdụ ọdụ kacha nso. Ọ bụ ya mere ịdị njikere iji mee ihe dị oke mkpa! Na ị ... have nwere ihe niile gị skai ngwá njikere, gụnyere gị snow ugogbe anya 2020 maka oge ski a?
Otu ngwa ngwa egwuregwu kachasị mkpa ị ga-ebu mgbe niile mgbe ị gara na ebe snow dị bụ ntụkwasị obi gị snow ugogbe anya. O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ị hụrụ ya n’anya snowboard ma ọ bụ ski, gị snow ugogbe anya 2020 Ha enweghị ike ịhapụ ndị otu egwuregwu gị.
Ọ gaghị ekwe omume ịme egwuregwu snow na-enweghị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ "anwansi" ahụ snow ugogbe anya ha na-enye agba Na e nwere ọtụtụ ihe mere anyị ga-eji na-ebu anyị snow ugogbe anya! N'agbanyeghị oge ị gara, oge na ụdị snow nke dara ... snow ugogbe anya 2020 ha bu a ga!
Maraworị ihe ndị mere ị ga-eji na-eyi ugegbe ma ọ bụ nkpuchi gị mgbe ọ bụla ị na-aga ebe snow na-ada? O doro anya na ọ bụ oge na-eme gị nkpuchi snow ma jikere maka nka oge skai Gụ ma chọpụta uru nke iyi ihe kachasị mma snow ugogbe anya!
Jiri ihe kacha mma chebe onwe gị!
Gini mere m ga eji eji enyo anya?
Egwuregwu snow dị ịtụnanya. O doro anya na anyị na-atụkwu anya karịa etu ndị nwere ọgụgụ isi ga-esi nwee. agba n'oge a, yana ọgbọ ọhụrụ nke ndị na-egwu ski na-enye ihe niile maka njem. Mana otu ọghọm dị na snow bụ na ọ nwere ike ịmerụ ahụ ike anyị ahụ ma ọ bụrụ na anyị akpachaghị anya.
Ma ndị ọkachamara na ndị mbido na ndị njem nleta na ebe ezumike ga-echedo ihu ha snow ugogbe anya na ugogbe anya maka anwụ. Mmetụta nke snow na anya na ọhụụ nwere ike ime ngwa ngwa na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị amataghị ya, n'ihi nke a ka a na-atụ aro ya mgbe niile ka ọ na-eyi nchedo anya mgbe ọ bụla na ebe snow gụnyere ihe a na-akpọ "ikpu ìsì snow".
"Nkpu isi nke snow" bụ otu n'ime mmerụ ahụ anya kachasị na ị nwere ike ịnwe site na ngosipụta dị ukwuu na radieshon nke anyanwụ na mpaghara snowy. Aha sayensi maka onodu a bu keratitis anwu, obu ezie na amara ya dika "photokeratitis", o mejuputara mbufua nke uzo uzo kachasi anya nke anakpo cornea.
Anyi aghaghi iburu nke anyi snow ugogbe anya a kwadoro ka ọ ghara ịta ahụhụ site na mgbaàmà nke ikpu ìsì, nke nwere ike ịpụta 6 ruo 12 awa mgbe ekpughere n'ihi oke ọkụ na radieshon, na nke kachasị bụ na anya abụọ ahụ na-emetụta mmerụ ahụ. Ihe mgbaàmà ndị a na-ahụkarị gụnyere ịhụ nhụjuanya anya, ịdị nro nke ọkụ, anya na-acha ọbara ọbara, mmetụ iwe, akwa, na oke mgbu.
Ekwesịrị m ilele anya m site na snow?
Anyị kwesịrị ilekọta anya anyị site na mmetụta na-atụgharị uche nke snow. Ọ dị mkpa iburu n'uche etu snow nwere ike isi bụrụ maka ọhụụ anyị na anya anyị dị ka ihe na-eme ka anyị ghara ịkpachara anya, yana ịghọtakwa mkpa ọ dị iyi uwe anyị mgbe niile. snow ugogbe anyailekọta anya anyị.
Ski oge ezumike n'etiti agba na ndị ọrụ ibe, ha bụ oge a na-agaghị echefu echefu na anyị ekwesịghị ịhapụ ma ọ bụrụ na anyị nwere ohere ịnụ ụtọ ha, mana ọ dị mkpa ịghọta na a ga-ewere ihe egwu na njem dị oke mkpa ma were usoro mgbochi niile anyị nwere ike iji nkpuchi snow.
Kedu ihe kpatara mpaghara snowy nwere ike bụrụ ihe na-emebi ọhụụ anyị?
Mpaghara snowy kachasị njọ maka anya maka isi ihe abụọ a:
You mara na snow na-egosipụta ihe ruru 80% nke radieshon ultraviolet? Nke a pụtara na ọ na-egosipụta okpukpu anọ karịa mmiri, nke bụkwa ihe kpatara iji lekọta anya anyị.
You mara na ogo nke ebe snow na-emetụta karịa anyị? Mmetụta na-emerụ ahụ nke anyanwụ na-abawanye na mpaghara snowy ebe ọ bụ na ọnụọgụ nke radieshon ultraviolet na-abawanye 10% maka 1000m ọ bụla dị elu, dị ka nsonaazụ Mbelata nke nzacha nke ikuku.
Anyanwụ na-ekpuchi anyị kwa ụbọchị, gụnyere ụbọchị ndị kasị sie ike, ebe ndị snow dịkwa iche. N’ezie, ebe ndị a bụ otu n’ime ala ndị a na-aghaghị ilebara anya ma gbochie mgbochi ka ukwuu. Njirimara ya na ọnọdụ ya na-eme ka ogo nke ọnọdụ sitere na radieshon nke anyanwụ na-ebute na snow. Anyị ga na-eyi mma mgbe niile snow ugogbe anya 2020 ndị na-echebe anyị iji lekọta anya anyị nke ọma ma kwe nkwa ọhụụ magburu onwe ya maka gburugburu ebe obibi na-arụ ọrụ, na-ezere itinye onwe anyị na ụdị mmebi ọ bụla dị njọ.
Na mgbakwunye na ihe a maara dị ka keratitis anyanwụ, ọ dị mkpa iyi mgbe niile snow ugogbe anya iji kpuchido anyị pụọ n'ọnọdụ ndị ọzọ dịka mmerụ ahụ, ngafe anya nje na esemokwu nke anya. Anyị na-eji ihe ọma ezere ihe a niile snow ugogbe anya, mma ma kwadoro nke na-echebe ọhụụ anyị ma nyere anyị aka ịdị mma kwa ụbọchị agba.
Gịnị bụ ihe kasị mma snow enyoanya 2020?
Igwe ugo kacha mma kachasị mma bụ ugogbe anya dị mma nke dabara na mkpa anyị dị ka ndị na-egwu mmiri ma ọ bụ ndị na-agba ịnyịnya, ma na-echebe anyị pụọ na anyanwụ na ihe ndị dị ka o kwesịrị.
Nke kacha mma Ski iko:
Ekwesịrị ịmekọrịta ha ma rube isi na ụkpụrụ ISO, na-egosi asambodo ha site na CE yana nkwa nke European Union.
Ga-abụrịrị snow ugogbe anya 2020 N'aka iji nyere anyị aka izere echiche na-akpasu iwe.
Ha ga-enwerịrị anya anya ndọta iji họrọ ụdị iko kachasị mma dị ka oge ahụ si dị.
Ha na-ekwe nkwa nchebe site na anyanwụ ma ọ dịkarịa ala 90%; erughị nke ahụ ga-adị obere.
Ha ga-enwete nchebe UV-400, ya bụ, megide ụzarị anyanwụ UVA na UVB.
Ekwesịrị iji polycarbonates ndị nwere akpụ akpụ, dịka thermoplastic polyurethane, maka ezigbo mgbanwe na njigide.
Ha aghaghi ibu snow ugogbe anya na-eguzogide ọgwụ, ìhè, nkasi obi na karịa mgbanwe niile ka ha wee rụọ ọrụ ha n'ụzọ ziri ezi.
Bụrụ Iko ugo na mgbochi ileghara ukpụhọde eriri.
Ha aghaghi ibu snow ugogbe anya Na n'ime onwe-condensing ventilashion usoro, nke mere na ikuku re-mgbasa na-aga n'ihu na-ekwe nkwa gị visibiliti.
Ha nwere n'etiti nkọwa ha okpukpu abụọ mgbochi mgbochi usoro (antifog) ya mere ha anaghị efe efe mgbe ha na-eji ya.
SNOW GlasAS 2020: nddị
Ọnọdụ nke snow ugogbe anya 2020 ha dabere na akụkụ 4: agba, nha, ike na etiti. Afọ a na-emekarị bụ iyi uwe na-enwu gbaa na mgbakwunye na ndị na-echebe ya na-eme ka ị bụrụ ihe ịtụnanya. Ọnọdụ nke snow ugogbe anya2020 / 2021bụ:
Omume snow snow enyo anya
Igwe ugo na-acha uhie uhie nwere etiti anaghị ahụ anya
Oké etiti snow enyoanya
Nkecha snow ugogbe anya
Agbanyeghị, nnukwu omume n’afọ a bụ teknụzụ dị n’azụ snow ugogbe anya 2020: High-Performance Optics X-POLAR bụ ihe ọhụrụ na-ewu ewu 2020/2021.
Iche echiche ịzụ enyo ọhụụ ọhụrụ nwere ike ịkpalite ụfọdụ irighiri akwara, mana ọ bụrụ na i doro anya gbasara ndụmọdụ ndị dị mkpa iji soro iji mezuo ebumnuche gị n'ọrụ, mgbe ahụ ihe niile ga-adịrị gị mfe.
Tinye ego na teknụzụ.
Gosiputa udiri agwa gi.
Chọọ ihe kachasị mma.
Họrọ snow ugogbe anya gbaara na UV400 mkpuchi anyanwụ.
Họrọ Iko ugo vasatail na kennyeghari anya lenses: maka foogu, mmiri ozuzo, blizzards na oge ski 2020.
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere njirimara ndị a mgbe ịzụrụ ngwa ngwa ngwa egwuregwu, ọ nweghị ụzọ ị ga-esi mebie, mana ịhọrọ nke kachasị mma snow ugogbe anya 2020.
Ọ ga-abụ oge ọkọchị, ma ọ ga-abụ n'oge oyi ... oge ski. Onye ọkachamara kachasị mara ya nke ọma: nchekwa na-ebu ụzọ! Ya mere egbula oge mee ihe oma gi snow ugogbe anya 2020 Lee gị na njem!
Ọ bụrụ n ’ị ka na-eche echiche ibido n’egwuregwu oyi, oge agabigaghị inyocha ihe masịrị gị mgbe ị na - ahọrọ ebe ị ga - ebido, họrọ ụdị nke ga - adịrị gị mma ma ghọta.
Off-piste descent with your Snow Goggles The kacha mma nke freeride!
Freeride bụ ụdị nke snowboarding nke ị na-agbadata kpamkpam-piste, na snow na-amaghị nwoke, ya na ezigbo enyo enyo, na-ezere nkume na mgbochi niile na-apụta.
Họrọ Igwe Igwe Igwe Igwe Anyi Nwere Ike Họrọ nke kacha mma n’ime naanị usoro 3!
Ọ bụrụ na ị na-abanye ụwa nke snowboarding, ma ọ bụ na ịchọrọworị iji dochie anya ihu igwe ochie gị na ndị ka mma, ndị kachasị nke ọma na ndị na-eguzogide ọgwụ, anyị nwere usoro zuru oke maka ịhọrọ.
Ndị a bụ oge 5 mgbe ị ga-eyi ugogbe ikuku gị
Ijiri ihe mkpuchi dị mma dị mkpa mgbe ị na-eme egwuregwu dị egwu n'oge snow. Do na-eche na ị dịla njikere imeri ihe egwu nke okike mgbe ị na-agba ski? Chọpụta 5
Ski Goggles Chọpụta mgbe na ihe kpatara ị ga-eji ha!
Gbanye ugogbe ịgba agba dị mkpa mgbe anyị na-eme egwuregwu a n'ụdị ya ọ bụla. Nọgide na-agụ iji mara usoro kachasị mma
© 2020 Uller. Ikike Niile Echekwabara